ယူအေအီးအတွက် 2018 ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်အကိုင်အဘို့ကိုစုဆောင်း🥇
ဇန်နဝါရီလ 6, 2018
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုယူအေအီးအတွက်အများအပြားနေရာလွတ်အဘို့ကိုစုဆောင်း, 2018 ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း။ ဒါကြောင့်သင်ကဒူဘိုင်းအတွက်ဂျော့ရှာနေလျှင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှ CV ကို drop နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်အကိုင်များ & နေရာလွတ်ရ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အများအားဖြင့်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်ပါကစ္စတန်ပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ကျော်ကနေအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများကကူညီရန်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ရှာဖွေသူများအားကူညီပေးနေသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေပညာရှင်များ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအဖွဲ့ကအဓိကအားဖြင့်သင်တစ်ဦးအလုပ်ရကူညီပေးဖို့လူမှုမီဒီယာအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုအာရုံစိုက်နေသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကနိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေနေကြသည်လျှင်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအတွက်ဂိမ်း changer.
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရနိုင်ရှိရာဒူဘိုင်းအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုရှိပါသည်။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကအလွယ်တကူဒေသခံအလုပ်အကိုင်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒါ့အပြင်အမေရိကန်ကနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှရုန်းကန်နေကြလျှင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်နှင့်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုတင်ပို့ခြင်းကဲ့သို့ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ။ ယူအေအီးရှိစုဆောင်းသူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း ဒါ့အပြင် ယူအေအီး၌သင်တို့၏ပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်တင်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင် GCC နိုင်ငံများတွင်သစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့။ ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အသုံးပြုသူများအကောင့်သည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက် HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုအမှုဆောင်အရာရှိတစ်လမ်းဖေါ်ပြသည်။ နှင့်သင်တန်း၏, ဘာယူအေအီးအတွက်လုပ်ဖို့.
ထိုကဲ့သို့သောအိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်, တောင်အာဖရိက, နှင့် Philipines အဖြစ်ပြည်ပမှာနိုင်ငံများမှကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်။ ကျိန်းသေမေတ္တာရှင် WhatsApp ကိုဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စုများ။ အသစ်ကငှားရမ်းမန်နေဂျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများအပေါ်စိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်လို့ပဲ။ ထိုအခါအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလားအလာအလုပ်ရှင်များ။ အသေးစိတ်တောင်းဆိုချက်နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အမှတ်စုလက်ခံခြင်း။ နှင့်သင်တန်း၏နှင့် အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း.
ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိများကထောက်ပံ့ပေးဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုန်ဆောင်မှုဖြစ်လာ ကောင်းစွာလူမှုမီဒီယာများတွင်လူသိများ။ ကျနော်တို့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပေးကြသည်အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားရိုးရှင်းပါသည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ အားမရကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ယူအေအီးအတွက် 60 ရက်ပေါင်းမှတက်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စရှိရာအရပ်၌သင်တို့ထံမှဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ရဖို့ရှာကြသည်သောအရာကိုအနေအထား။ ကျနော်တို့ကဒီမှာဖြစ်ကြောင်း ပစ်မှတ်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်အောင်မြင်ရန်သင်ကူညီ။ 2018 ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကအကောင်းဆုံးကိုအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ CV ကို Send
အတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှု ဒူဘိုင်းရေတွင်းတစ်တွင်းဒေသခံအမှုဆောင်အရာရှိဘို့ကိုသိဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြု. ကြောင့်အခြားသောလမ်းထားရန်။ သင့်အနေဖြင့်ကမ္ဘာ့အချို့ကို join လို့ရပါတယ် အကောင်းဆုံးလူသိများစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အသငျသညျန်ထမ်းများရှာဖွေနေကြသူ HR အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများဖြစ်ရပြီ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်တော်ပြန်များအတွက်လုပ်။ ကျနော်တို့ 2018 ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်းနေကြသည်။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်, သင်ကကမ္ဘာ့အဆင့်မီစုဆောင်းမှုဝန်ဆောင်မှုရှာနေလျှင်။ သင်ကမှရနိုင် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီမှာစုဆောင်းမှုပညာရှင်များ။ အလုပ်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်မှဖွစျနိုငျကွောငျးအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီစော်ဘွားအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအမှုဆောင်အရာရှိတစ်ဦးကနိုင်ငံတကာဆက်ကပ်အပ်နှံအသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်များပေးသော, အာရှနှင့်အနောက်တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ အမြဲဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေပါသည်။ အသစ်သောအဖှဲ့အစညျးမြားအဘို့အရှာနေကြသူအတိုင်ပင်ခံ။
အခုတော့သူတို့ကကျနော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ GCC နိုင်ငံများတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ တဖန်သင်တို့လည်းသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စတင်နိုင်ပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသင့်ရဲ့အလုပ်သစ်ရှာမည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့သင့်စိတ်ကိုဖွင့်ထား၏။
အဘယ်ကြောင့်ပြုကြအချို့ အလုပ်ရှာဖွေသူများ အမြဲတမ်းရ အလုပ် သူတို့လိုချင်တဲ့?
သူတို့ကြောင့် အပ်လုဒ်လုပ်နေသည်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအင်တာဗျူးရ!
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ 8 နှစ်ကျော်စုဆောင်းမှုအတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, ကျနော်တို့အဘို့ကိုစုဆောင်းနေကြသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် GCC နိုင်ငံများ.
ဤအချက်များပေးသော, ကျွန်တော်တို့ရဲ့်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေးဂျင့် ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ.
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းများအတွက် အဘယ်အရာကိုဒူဘိုင်းသိတယ် အဖွဲ့အစည်းများသည်သင်၏အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းကိုရှာပါ။
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစာရှောင်ခြင်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားများကို အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့မှကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဝန်ဆောင်မှု.
ကျနော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြ ယူအေအီးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ & ဆော်ဒီအာရေဗျ, ဘာရိန်းနှင့်အဲဂုတ္တုပြည်၌ GCC နိုင်ငံများမှသစ်ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖောက်သည်ရာပေါင်းများစွာရှိသည်။
ယူအေအီးအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အခြမ်းရှာဖွေစုဆောင်းတွင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းများကဲ့သို့ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ဘယ်လောက်သိတယ်။ ရုံမှ ယူအေအီးဒေသအတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်.
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထား, ငါတို့ ကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းကိုအနုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအမြဲအသစ်အပလီကေးရှင်းကိုရှာဖွေနေ။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ 480,000 ကျော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် အောင်မြင်စွာအသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာချ.
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, ယူအေအီးအသစ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေအချိန်ကြာပါတယ်။ ငါတို့သည်အလိုတော်ရှိ သုတေသနပြုနေရာလွတ်နှင့်အတူသင်ကူညီ.
နှင့်အချိန်သုတေသနပြု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအခန်းကဏ္ဍများအတွက် က 60 နေ့ရက်များမှလျော့ချလိမ့်မည်။
ထိုအကြောင်း၏ထိပ်ပေါ်တွင်သင်အမြဲလိမ့်မည် ဒူဘိုင်းတစ်ဦးကယောဘကိုရှာဖွေ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစုဆောင်းမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကူအညီနဲ့အတူ။
2018 ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း !.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့2key ကိုပေးအပ်ကြသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်န်ဆောင်မှု။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေး ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်န်ဆောင်မှု။ အဖြစ်ယူအေအီးအတွက် HR အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှု။ အတူတူစီမံကိန်းကိုစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ။ အညီအမျှအရေးကြီးသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအိန္ဒိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးပေး။ ဤစကားမှန်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း 50 ထက်ပိုဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အလုပ်ရှာဖွေသူများအိန္ဒိယကနေလာ နှင့်ဒေသခံဒူဘိုင်းအလုပ်ဈေးကွက်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်ကပ်အပ်နှံရှာဖွေစုဆောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့5Arabic အဘိဓါန်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိကျော်အပြေးနေသည်။ ကျနော်တို့ကိုအဲဂုတ္တုနှင့်အတူအနောက်ဘက်နှင့်ကာတာနိုင်ငံမှကြိုဆိုထက်ပိုများမှာ တောင်အာဖရိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြဲလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအသစ်သောအလားအလာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများကကူညီရန်ကြိုးစား။ 2018 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း ဒူဘိုင်းမြို့သင်တို့အဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်.
ကျနော်တို့ထမ်းခေါ်ယူမှုကောင်းတစ်ခုငွေပမာဏကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတိုင်ပင်ခံ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင် Headhunters တွင်လည်း။ ၏ရည်ရွယ်ချက် Philipines ကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ။ ထို့အပြင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခြေချသူတို့နှင့်အတူကူညီခြင်း။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းတွင်အကြီးဆုံးစုဆောင်းမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေကိရိယာအဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းထားပါသည်။ အကောင်းဆုံးငှားရမ်းကုမ္ပဏီများ, ရရှိရန် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ နှင့် ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုကိုစတင်ရန်။ Monster gulf နှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးဂျက်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
2018 - 2019 နှင့်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများစဉ်းစားတွေးခေါ်အများစုဟာ ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူအေအီးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေရေးရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို။ ဒီဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။ အထူးသဖြင့် 2018 နှင့် 2019 အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေသောကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမတို့အဘို့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အခက်ခဲဆုံးကုမ္ပဏီမှ အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျမရေမတွက်နိုင်အောင်ငှားရမ်းကုမ္ပဏီများနှင့်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါမြင့်တက် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အစျေးကွက်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်ပါတယ် ကုမ္ပဏီများသည်။ သင်အမှန်တကယ်ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းနေသောဒူဘိုင်းအတွက်အများအပြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ တကယ်တော့ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးအများစု ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါကိုစမတ်ကျအောင်ကြိုးစားပြီးကြိုးစားကြည့်ကြပါစို့ အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့.
အဆိုပါအများစုဟာ အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများ ယူအေအီး၏မြို့တော်နှိပ်ထားပါသည်။ သင်တို့မူကား, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်ရှိရာအခြားသောအရပ်တို့ကိုရှိပါသည်။ ရှိပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအများအပြားမြင့်တက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း ယူအေအီးဥပမာဘဏ္ဍာရေးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ငါတို့သည်အချို့သောဒေသခံသုတေသနစုစည်းရောက်ရှိနေကြသည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအထူးကုကိုလည်းအလွန်နီးကပ်စွာစောင့်ကြည့် ဘဏ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ သူတို့ကကျိန်းသေရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်ကိုသွားပင် ok မဟုတ်သေချာဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်။
သို့သော်သင်သည်ကျိန်းသေဖို့ကြိုးစားသင့်တယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသူတစ်ဦးစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီကိုရှာဖွေ။ အောက်ပါနှစ်များတွင်ယူအေအီးအစိုးရကျိန်းသေဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်နေရာချထားမြင့်တက်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူသင်တို့သည်သင်၏အတွေ့အကြုံအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
စော်ဘွားအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုဟာ။ အိန္ဒိယ, တောင်အာဖရိက, Philipines နှင့်သင်တန်း၏အခြား GCC နိုင်ငံများထံမှကျော် Moving ။ သူတို့အားလုံး ဒူဘိုင်းအတွက်အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရုံစိုက်နေကြတယ် ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့ကူညီ။ သငျသညျပါကစ္စတန်ကနေလာမယ့်လျှင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ယူအေအီး၌ထားရမည်ကိုကူညီကျိန်းသေဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျလညျးပါကစ္စတန်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းစီမံကိန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းကြသူအများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။
အများအပြားကပြည်တော်ပြန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့် ယူအေအီးအသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုစတင်။ သင်လည်းသူတို့ထဲကတဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ 60 ရက်အတွင်းအသစ်သောအနေအထား၌သင်တို့ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်တဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ သို့သော်အချို့ချွင်းချက်ရှိပါသည်။ လူတိုင်းမယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ။ စာရင်းအင်းများ 65% အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကျော် ဒူဘိုင်းအတွက်ဧည့်သည်။ အလုပ်အကိုင်ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံဖြုန်းနှင့်ယူအေအီးမှခရီးသွားလာ။ ထိုအခါအဆုံးမှာမဆိုအလုပ်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအသစ်အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံပေး စော်ဘွားအတွက်ဧည့်သည်။ အနိမ့်အဆင့်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၌အခြေခံအလုပ်အဖြစ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်သည် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အော်တိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ သင်ရုံဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးကတည်းက။ သငျသညျတစ်ပတ်အတွင်းတစ်ဦးက CEO ဖြစ်လာဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေ သင်စော်ဘွားနေထိုင်နေကြစဉ်။
ဖြစ်နိုင်သငျသညျယခုကဘယ်လောက်အံ့သြနေကြတယ် ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အတှေ့အကွုံနှငျ့အတူ။ ၏ဥပမာတစ်ခုမှာ မြင့်ပေးဆောင်အလုပ်ဆရာဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျတခုအင်္ဂလိပ်စပီကာများမှာလျှင်သင်ဥပမာငွေရှာနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်အဘယ်သို့ပြောဆိုရေးသားဖို့အခြားသူများကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါဟာတူသောပုံရသည် တစ်ဦးစကားမပြောနိုင်သောစိတ်ကူးပေမယ့်အလွန်ချောအလုပ်လုပ်တယ်.
အဆိုပါ ငှားရမ်းသူကုမ္ပဏီများ ယူအေအီးအတွက်ကောင်းစွာအွန်လိုင်းလူသိများကြသည်။ တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင် စော်ဘွားသစ်ဧည့်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျမွငျ့မား paid အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေလျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျိန်းသေ, အဘူဒါဘီနှင့်အတူဒူဘိုင်းသင်တို့နေစရာအရပ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဆိုကျွမ်းကျင်သူများအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာပျြောရှငျနိုငျယုံကြည်။ အထူးသဖြင့်သငျသညျအာရှသို့မဟုတ်ဥရောပကနေမှန်လျှင်။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ယူအေအီးအစိုးရများအတွက်တံခါးများဖွင့်လှစ် နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အလုပ်နေရာလွတ်။ အထူးသဖြင့်ကဲ့သို့သောသစ်ကိုဖြစ်ရပ်များအတွက် blockchain နည်းပညာ နှင့်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့များနှင့် စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း မည်သူမဆိုအစဉ်အမြဲလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ နယူးကျွမ်းကျင်သူများနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုထားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ပြီ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အ WhatsApp ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ သင်က skype ကသို့မဟုတ် WhatsApp ကိုကျော်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအင်တာဗျူးစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒူဘိုင်းမြို့ကကွာရွှေ့။ ကြှနျုပျတို့မှာ စုဆောင်းရေး 2018 ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့။